Shabakadda Isku-dhajinta: Dhibaatooyinka wanaagsan iyo Badanaaba - Faahfaahinta Nadaafada
Dhismuhu wuxuu u dhigmaa 55% dhammaan taraafikada webka. Taas macnaheedu waa inta ugu badan ee baabuurta websaydhkaagu waxay ka imanayaan xakamaynta Internet halkii aadanaha. Boorso waa barnaamijka software kaas oo mas'uul ka ah inuu ku shaqeeyo hawlo automated ah ee dunida digital. Dhibaatooyinka ayaa sida caadiga ah waxay sameeyaan hawlo dib-u-celin ah xawaare sarreeya oo inta badan aan loo baahnayn bini-aadanimo. Waxay mas'uul ka yihiin shaqooyinka yaryar ee aan caadi ahaan u qaadanno, oo ay ku jiraan mashiinka raadinta raadinta, kormeerka caafimaadka ee websaydka, qiyaasidda xawaaraha, awoodda API-ga, iyo in la isticmaalo nuxurka bogga. Bots ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si loo hubiyo hanti-dhowrka amniga oo lagu baadho boggagaaga si aad u hesho dayacanka, si dhakhso ah wax uga qabashada.
Raadinta Farqiga u dhexeeya Xeebaha Wanaagsan iyo Badbaadada:
Dhibaatooyinka waxaa loo qaybin karaa laba qaybood oo kala duwan, xeelado wanaagsan, iyo dhago xun. Goobaha wanaagsan waxay booqdaan goobahaaga waxayna ka caawiyaan farsamooyinka raadinta raadinta bogagga internetka ee kala duwan. Tusaale ahaan, Googlebot wuxuu ku dulmarayaa boggag badan oo ku jira natiijooyinka Google wuxuuna kaa caawinayaa helitaanka boggaga internetka ee internetka. Waxay adeegsanaysaa algorithms si ay u qiimeeyaan barta shabakadaha ama website-yada loo xiri karo, inta jeer ee ay tahay in la gurto, iyo intee le'eg boggaan ilaa hadda. Goobo xun ayaa mas'uul ka ah inay qabtaan hawlo xaasidnimo, oo ay ka mid yihiin bogga jarista, faallooyinka spam , iyo weerarada DDoS. Waxay ka dhigan yihiin 30 boqolkiiba dhammaan taraafikada internetka..Kootariyeyaashu waxay fuliyaan xeryaha khatarta ah waxayna qabtaan hawlo kala duwan oo xaasidnimo leh. Waxay miisaamaan malaayiin baaluq oo bogag intarnet ah waxayna bartilmaameedsanayaan in ay wax xadaan ama xoqaan waxyaabo sharcidarro ah. Waxay sidoo kale isticmaalaan xajmiga xargaha iyo si joogto ah u eegaan plugins iyo software kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu dhex galo bogaggaaga iyo macluumaadkaaga.
Badanaa, makiinadaha raadiyuhu waxay u arkaan nuxurka qashinka ah ee ka kooban mawduucyada soo koobaya. Waxay waxyeello u tahay darajooyinkaaga raadinta raadinta iyo xoqidaada waxay ku qabsan doonaan RSS-kaaga si ay u galaan una noqdaan kuwo cusub. Waxay ku kasbadaan lacag badan farsamadan. Nasiib darro, mashiinnada raadinta ma aysan hirgelin hab kasta oo looga takhaluso qatarta xun. Waxay macnaheedu tahay haddii maadadaada la koobiyeeyo oo si joogto ah u dhajiso, darajadaada boggaaga waxay dhaawaceysaa dhowr toddobaad. Mashiinnada raadinta ayaa ciqaabaya goobaha ay ku jiraan mawduucyo kala duwan, mana garan karaan bogga ugu horeeya ee la daabacay gabal gabalka.
Dhamaan xarumaha oo dhan waa ay xun yihiin
Waa in aan qiranno in burburku uusan had iyo jeer waxyeello lahayn iyo mid xun. Waxay faa'iido u leedahay milkiilayaasha bogagga marka ay doonayaan in ay faafiyaan xogta dadka shakhsiyaadka badan ee suurtogalka ah. Tusaale ahaan, goobaha dawlada iyo dukumiintiyada safarka waxay bixiyaan macluumaad faa'iido leh dadweynaha. Xogta noocan ah ayaa badanaa laga helaa API-yada, iyo waraaqaha ayaa loo adeegsadaa si ay u ururiyaan xogtan. Taas macnaheedu maaha, inay waxyeello u geysaneyso website-kaaga. Xitaa markaad xareeysid mawduucan, ma dhaawici doonto sumcadda ganacsigaaga internetka.
Tusaale kale oo ka mid ah xoqidda dhabta ah iyo kan sharciga ah waa goobaha gundhiga ah sida dekadaha barta huteelada, goobaha tikidhada, iyo wargeysyada. Qodobada ka mas'uulka ah u qeybinta waxyaabaha ku jira boggaan internetka waxay ka helayaan xogta API-ga waxayna ku xoqayaan sida ku qoran amarradaada. Waxay bartilmaameedsanayaan in ay wadaan gaadiidka iyo soo saaraan macluumaadka loogu talagalay websaydhada iyo barnaamijyada Source .